VidTrans16 တွင် DigiLink မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြေများအား Artel Video Systems မှပြသမည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » VidTrans16 မှာ DigiLink မီဒီယာပို့ဆောင်ရေး Solutions ခင်းကျင်းပြပေးပါရန် Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ
WESTFORD, Mass - ။ ဇန်နဝါရီလ 26, 2016 - တဲ 16 အတွက် VidTrans200 မှာ, Artel ဗီဒီယိုစနစ်များကမ္ဘာ့ဆက်သွယ်ရေး, ထုတ်လွှင့်နှင့်ဆက်စပ်စျေးကွက်ထောက်ပံ့နေတဲ့ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဆန်းသစ်သော IP- ၏ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့်ဖိုင်ဘာ-based မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းနည်းများ, ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးသည် IP ကွန်ရက်များအနှံ့မီဒီယာ, တိုက်ရိုက်ဖိုင်ဘာနှင့် optical Backbones ရဲ့ပို့ဆောင်၎င်း၏ DigiLink မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
အဆိုပါ DigiLink မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခု All-IP ကို-based ဒါမှမဟုတ် hybrid SDI / IP ကို-based မီဒီယာကွန်ယက်ဖက်ပြောင်းထုတ်လွှင့်, ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီများ, ဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းဖို့အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
၏ "ဟုစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့လက်ခံမှု SMPTE 2022-6 ယုံကြည်စိတ်ချရသောအိုင်ပီထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးမီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရှာဖွေနေအများအပြားစျေးကွက်များအတွက်အဖြစ်မှန်အောင်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုတွမ် Beardsley မှာကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာကဆိုသည် Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ။ "VidTrans16 မှာ Artel ပို့ဆောင်ဘို့, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနှင့်လွယ်ကူသော-to-စီမံခန့်ခွဲဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပြီးပြည့်စုံတစ်စုံတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် HD-SDI, အိုင်ပီကွန်ယက်ကိုကျော် SD က-SDI နှင့်ဒီဗွီဘီ-asi ။ ညီလာခံတက်ရောက်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ IP ကို-based နှင့်အခြားမီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် Artel ရဲ့တဲအားဖြင့်ရပ်တန့်ရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။ "
ဒါ့အပြင် Artel VidTrans16 မှာ multivendor အော်ပရေးရှင်းတွင်ပါဝင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ အဆိုပါကွန်ဖရလျှောက်လုံးဆန္ဒပြပွဲများရောင်းချသူနောက်ဆုံးပေါ် VSF နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်နာဘယ်လောက်ပြသပါလိမ့်မယ်။ Artel ၏ထုတ်ကုန်-based စံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုအော်ပရေးရှင်းကာလအတွင်း Artel အဆိုပါ DigiLink မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူလိုက်နာမှု၌ရှိ၏ကွောငျးတငျပွပါလိမ့်မယ် SMPTE 2022-6 စံ "အိုင်ပီကွန်ယက်ကျော်အမြင့် Bit Rate မီဒီယာနေရင်မြန်အောင်၏ပို့ဆောင်ရေး။ " အမည်ရ
Artel နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.artel.com.
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး, ထုတ်လွှင့်နှင့်ဆက်စပ်စျေးကွက်ထောက်ပံ့ဆန်းသစ် IP- နှင့်ဖိုင်ဘာ-based မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်၏လောကဓာတ်-class ကိုပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ Artel ရဲ့ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်ဆုရ DigiLink မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းများပါဝင်သည်; Fiberlink, fiber optic ဂီယာထုတ်ကုန်များစက်မှုလုပ်ငန်းအကြီးမားဆုံးရွေးချယ်ရေး; နှင့် Scan ကိုကွန်ပျူတာကဗီဒီယိုစကင် converters အဖြစ်ပါ။ Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ တစ်ဦးဝန်ထမ်းပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.artel.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Artel/ArtelVideoSystems-DigiLinkMediaTransportPlatform.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ DigiLink မီဒီယာပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်း
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ DigiLink မီဒီယာပို့ဆောင်ရေး Solutions ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-01-27
ယခင်: အီတလီရုပ်မြင်သံကြားပြရန်, Melaverde များအတွက်အသံဖုန်းများအတွက် '' 633 Capture Savory အသံ
နောက်တစ်ခု: Mountable Cable ကို Holder ထိန်သိမ်း